နတေိုးနဲ့ပထမဆုံး စုံတှဲပုံစံလေးတှဲဆော့ထားတဲ့ ခွူးလေးရဲ့TikTok – မြန်မာသတင်းစုံ
နတေိုးနဲ့ပထမဆုံး စုံတှဲပုံစံလေးတှဲဆော့ထားတဲ့ ခွူးလေးရဲ့TikTok
ခွူးလေးကတော့ မာနျမာနကငျးပွီး ခဈြစဖှယျခြိုသာအေးခမျြးတဲ့မကျြနှာလေးက ပရိသတျ ရငျထဲကို စှဲနစေခေဲ့တဲ့အပွငျ TikTok မငျးသမီးလေးလို့တောငျ ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါဆိုကွလရှေိ့ကွပါတယျ။လကျရှိမှာလညျး ပွညျသူ့အခဈြတျောနိုငျငံကြျောမငျးသားကွီးနဲ့တှဲဖကျကာ ရုပျရှငျကွျောငွာတှရေိုကျကူးနတောဖွဈပွီး ကွျောငွာရိုကျကူးရငျး အမှတျတရအနနေဲ့ TikTok လေးလညျး နတေိုးနဲကတှဲဖကျကာ ဆေ့ာကစားခဲ့ပါသေးတယျ။
အဲ့အကွောငျးကိုတော့ ခွူးလေးက“ပထမဆုံး Tiktok လေး K.K.N.T ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာကနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ဝမြှေထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။နတေိုးနဲ့အတူတူ Tiktokဆော့နတေဲ့ပုံလေးကတော့ပရိသတျတှကေို အသညျးသညျးတယားယားဖွဈစပေါတယျ
ခွူးလေးကတော့ ခငျမငျတဲ့သူငယျခငျြးအနုပညာရှငျတှနေဲ့ဆုံတိုငျး Tik Tok မဆော့ဖူးတဲ့သူတောငျ ဆော့ဖို့တိုကျတှနျးတဲ့သူလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ပရိသတျတှကေလညျး သူ့ရဲ့ Tik Tok တှကေို သဘောကြ အားပေးလရှေိ့ကွတယျလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလညျး နတေိုးနဲ့ပထမဆုံးTikTok ဆောခဲ့ရလို့ ခွူးလေးတဈယောကျဘယျလောကျပြျောရှငျနလေဲဆိုတာကို ပရိသတျကွီးအတှကျဗီဒီယိုဖိုငျနဲ့အတူ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ….
Source : Chue Chue
“ နေတိုးနဲ့ပထမဆုံး စုံတွဲပုံစံလေးတွဲဆော့ထားတဲ့ ခြူးလေးရဲ့TikTok ”
ခြူးလေးကတော့ မာန်မာနကင်းပြီး ချစ်စဖွယ်ချိုသာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးက ပရိသတ် ရင်ထဲကို စွဲနေစေခဲ့တဲ့အပြင် TikTok မင်းသမီးလေးလို့တောင် ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဆိုကြလေ့ရှိကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း ပြည်သူ့အချစ်တော်နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးနဲ့တွဲဖက်ကာ ရုပ်ရှင်ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာရိုက်ကူးရင်း အမှတ်တရအနေနဲ့ TikTok လေးလည်း နေတိုးနဲကတွဲဖက်ကာ ဆေ့ာကစားခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲ့အကြောင်းကိုတော့ ခြူးလေးက“ပထမဆုံး Tiktok လေး K.K.N.T ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာကနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဝေမျှထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးနဲ့အတူတူ Tiktokဆော့နေတဲ့ပုံလေးကတော့ပရိသတ်တွေကို အသည်းသည်းတယားယားဖြစ်စေပါတယ်
ခြူးလေးကတော့ ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဆုံတိုင်း Tik Tok မဆော့ဖူးတဲ့သူတောင် ဆော့ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့ Tik Tok တွေကို သဘောကျ အားပေးလေ့ရှိကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အခုလည်း နေတိုးနဲ့ပထမဆုံးTikTok ဆောခဲ့ရလို့ ခြူးလေးတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်နေလဲဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
Previous Article သမီးလေးမှေးလာလို့ သားက သဝနျတိုပွီးဆိုးခငျြလာတယျဆိုတဲ့ အောငျလအနျဆနျ
Next Article ကိုယျ့သားသမီးငယျငယျလေးတှကေို ဖုနျးပေးကိုငျတဲ့ မိဘတှေ သငျခနျးစာယူရမယျ့ ဖွဈရပျတဈခု